Yuunvarsiitiin Arsii manneen barnoota aanaalee godina Arsii 8 irraa filataman 40f deeggarsa meeshaalee ittisa Covid 19 taasise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Yuunvarsiitiin Arsii manneen barnoota aanaalee godina Arsii 8 irraa filataman 40f deeggarsa meeshaalee ittisa Covid 19 taasise
On Oct 11, 2021 68
Finfinnee, Onkoloolessa 1, 2014 (FBC)- Yuunvarsiitiin Arsii manneen barnoota aanaalee godina Arsii 8 irraa filataman 40f deeggarsa meeshaalee ittisa Covid 19 taasiseera.
Preezdaantiin Yuunvarsiitii Arsii Dooktar Dhugumaa Addunyaa saganticharratti argamuun haasawa taasisaniin, vaayrasiin koroonaa ammaas daran hammaachaa waan jiruuf barattoonni hubannoo argachuun ofeeggachuu irra darbanii maatii isaanii hubachiisuun vaayrasicharraa baraaruu qabu jedhan.
Yuunvarsiitichi rakkoolee hawaasaa furuuf hojii hojjetaa jiru cimsee akka itti fufuus himaniiru.
Dabalataanis yuunvarsiitichi qajeelcha poolisii Godina Arsii fi manneen murtii godinaa fi magaalaa Asallaatiif meeshaalee ittisa vaayrasii koroonaa arjoomeera.
Sirnicharratti dura bu’ootaa fi barattoota manneen barnootaa kanneen irraa walitti babahanii fi qaamolee mootummaa sirnicharratti hirmaataniif maloota ittisa dhibichaaf fayyadan irratti hubannoon kennameera.
Itti Gaafatamaan Waajjira Barnootaa godinichaa obbo Ahimad Huseen gama isaaniitiin deeggarsa yuunvarsitichi manneen barnootaa godina isaaniitiif kenneef galateeffatanii hojii fakkeenyummaa guddaa qabu ta’uu ibsaniiru.
Abdallaa Amaantu gabaase